High fametrahana mazava Fibre Laser manapaka Machine FAA-0605P - China Dongguan Glorystar Laser
Short Description: High fametrahana mazava Cutting Effect, mety ho kely ny vokatra. Ary tehirizo ny atrikasa mpanjifa. Endri-javatra: Ny toe-FAA-0605P mandany marina argon Arc welding, mari-pahaizana 600 hafanana fitsaboana. 24 ora hihena am in'ny fanendasa-12 metatra gantry nitotoana azy, mba hahazoana antoka maharitra mihazakazaka tsy deformation, Machine no nizaha ny fametrahana mazava tsara tamin'ny laser collimator mba hahazoana antoka ny flatness sy ny verticality. Ny fametrahana mazava tsara ny milina rehetra dia latsaky ny 0.02mm. Adpot dehibe servo maotera, im ...
Fametrahana mazava avo Cutting Effect, mety ho kely ny vokatra. Ary tehirizo ny atrikasa mpanjifa.
Ny toe-FAA-0605P mandany marina argon Arc welding, mari-pahaizana 600 hafanana fitsaboana. 24 ora hihena am in'ny fanendasa-12 metatra gantry nitotoana azy, mba hahazoana antoka maharitra mihazakazaka tsy deformation, Machine no nizaha ny fametrahana mazava tsara tamin'ny laser collimator mba hahazoana antoka ny flatness sy ny verticality. Ny fametrahana mazava tsara ny milina rehetra dia latsaky ny 0.02mm. Adpot dehibe servo maotera,-dehibe visy Module rafitra fampitana. Fitaovana ny mandroso indrindra Wireless handheld terminal. Afaka manao fanaraha-maso lavitra fanodinana.
Nampiasaina be teo amin'ny Carbon vy, Stainless Steel, Aluminum, sns vy sy varahina fitaovana.
Be mpampiasa amin'ny fametrahana mazava tsara ny vokatra vy. Ohatra: solomaso Industry, Craft fanomezana Industry, Hardware firavaka & Accessories, Electronics, Household Appliance sy ny hafa Inddustry
Laser fahefana 700w, 1000W, 1500W, 2000W (tsy voatery)
miasa faritra 600 * 500mm
Fahefana amin'ny ankapobeny fanjifàna <12 KW
Transmission maody Double Ball Sokiro
lafiny: 2050 * 1633 * 2060mm
Previous: CNC hydraulic Press notapahiny
Manaraka: F-6018T Tube / Pipes Fibre Laser Cutter